Amaphilisi okulawula ukuzalwa kwamahomoni
Izivikelo zokwelapha zomlomo ze-Hormonal ziqinisekisa ukuvikeleka okungamaphesenti angama-99% ekukhulelweni okungadingeki. Kodwa-ke, akubona bonke abesifazane abakulungele ukusebenzisa le ndlela yokukhulelwa. Iyini isizathu salokhu? Ziyingozi kangakanani lezi philisi? Yiziphi izinhlobo ezahlukene zokuvimbela izitho zomlomo ze-hormonal? Yonke yale mibuzo iphendulwa kulesi sihloko.
Ukusetshenziswa kwamaphilisi okulawula ukuzalwa
Ukusetshenziswa kwamaphilisi okukhulelwa kungenye yezindlela ezithandwa kakhulu ukuvikela ngokukhulelwa okungadingeki. Ngaphezu kwalokho, izinga lokuvikela aliphansi, mhlawumbe, ezindleleni ezivame kakhulu zokuvikelwa - ikhondomu. Kodwa ngezinye izizathu amaphilisi okuvimbela ama-hormonal enza ukuthi kube nokungabaza okuningi, amahemuhemu nokuhleba? Ake sibone ukuthi amaphilisi okubeletha ngomlomo asebenza kanjani, kungakhathaliseki ukuthi alimaza umzimba wesifazane, noma ngokufanayo, izinzuzo, nokuthi yiziphi izinhlobo zamathebulethi aziwa okwamanje.
Okushiwo ukwelashwa ngomlomo ukuthi ngaphansi kwethonya lamahomoni aqukethe amaphilisi, kukhona ukuvinjelwa kwe-ovulation, ngamanye amazwi, iqanda alivuthanga futhi alishiyi i-ovary. Ngaphezu kwalokho, amaphilisi okubeletha akwazi ukugcina ukuhambisana okudingekayo kwe-mucus emngceleni wesibeletho, okuvimbela ukuqhubeka kwe-spermatozoa. Ngakho-ke, lapho insimu ingena ohlelweni lokuzala, inqubo yokukhulelwa ayitholakali.
Kubonakala sengathi konke kulula futhi kucacile. Kodwa kungani abesifazane abaningi benqaba ukuthatha amaphilisi okulawula ukubeletha, besaba impilo yabo? Ezikhathini eziningi, ukwesaba kubangelwa yizikhulu zikagogo nomama mayelana nemiphumela emibi yokuthatha lezi zimali: lokhu kubonakala izinwele zesilisa ebusweni besifazane, kanti ubungozi bokuba nomdlavuza wesibeletho nesisu somlomo wesibeletho, nokunye ukungabi nabantwana, nokunye okuningi. Kodwa konke lokhu kusekelwe olwazini olungaphelelwe mayelana nokubeletha ngomlomo. Ake sibone, ingabe izakhi zokubeletha zomlomo zesizukulwane sokugcina zilimaza impilo yomzimba wesifazane?
Izinkinga ezingase zibe khona ekuthatheni amaphilisi okulawula ukubeletha
Ngeshwa, ukusho ukuthi amaphilisi okubeletha ngomlomo aphephile ngokuphelele, awukwazi. Imiphumela emibi isesekhona futhi ngokuqinisekile kufanele ikwazi. Imiphumela ejwayelekile kunazo zonke ezivezwe ngesikhathi socwaningo lwezokwelapha:
1) ukwanda kwengozi yokuthuthukisa umdlavuza womlomo wesibeletho, ngokusho kocwaningo lwamuva, cishe 50%;
2) wehla libido - ngokwemininingwane yabodokotela baseBrithani abavela ku-120 besifazane ababhekana nale nkinga, abangu-108 bathatha izisu zokubeletha ngomlomo;
3) ingozi eyandayo yokuthuthukisa i-thrombosis - enye yezinkinga ezivame kakhulu, ikakhulukazi ingozi yokukhula kwabesifazane ababhema;
4) ukubonakala kwesisindo esiningi ngokweqile kuwu-15% wabesifazane abaphatha amaphilisi.
Kodwa kuyazuzisa ukuqonda ukuthi lezi zingemiphumela emibi kuphela. Futhi lokhu akusho ukuthi ukuthatha isisu sokubeletha ngomlomo, ngokuqinisekile uzothola noma yimiphi imiphumela engalungile.
Izinzuzo zomzimba wesifazane ekuthathweni kokukhulelwa komlomo
Ngokuqondene nesenzo esiwusizo, nanka amaphuzu ambalwa:
1) ukuvikeleka ekukhulelweni okungafunwa - umsebenzi oyinhloko wamaphilisi okubeletha ngomlomo, ngokusetshenziswa okulungile nokujwayelekile kwenziwa ngo-99%;
2) ukunciphisa kabi (noma ukuphola okuphelele) okuhlangenwe nakho kwe-PMS (ubuhlungu bokuya esikhathini, ukuphazamiseka kwemisipha, ukuphuma kwegazi);
3) ukunciphisa okungu-35% engozini yomdlavuza we-ovarian kubantu besifazane abasebenzisa ukukhulelwa kwe-hormonal;
4) ukwelashwa kwezifo ezisekelwe ku-androgen (izinkuni, ukulahlekelwa izinwele, i-seborrhea, ukwanda kwezinwele emzimbeni).
Njengoba ubona, kwakukhona inani elilinganayo lemiphumela emihle kanye nemiphumela emibi ngokuthatha izisu zomlomo. Ngakho-ke, akunakwenzeka ukusho ngokucacile ukuthi amaphilisi ayingozi yini noma cha. Owesifazane ngamunye ngokuzikhethela unquma ukuthi uyakwamukela noma wenqabe izakhi zokubeletha zomlomo. Kodwa uma usenomthelela omuhle, qiniseka ukuthi uvakashele igciwane lakho lomzimba futhi uthathe zonke izivivinyo ezidingekayo. Ungumjozi wezinkinga zokubeletha okufanele ukhethe amaphilisi afanelana nawe ngokuya esikhathini kanye nesimo sempilo yesistimu yokuzala.
Izinhlobo zokukhulelwa komlomo
Njengamanje, izinhlobo ezimbili zamathebulethi zisetshenziswa kakhulu:
Izidakamizwa ezihlanganisiwe - aqukethe amahomoni amabili: i-progesterone (ivimbela ukukhulelwa) ne-estrogen (okudingekayo ukubonakala kokuya esikhathini). Futhi, amalungiselelo ahlangene angahlukaniswa ngokuthi:
ukuvimbela ukuvimbela ingane ngomlomo - aqukethe cishe inani elifanayo leprogesterone ne-estrogen; Amalungiselelo: Jess, Lindineth-20, Lyndynet-30, Novinet, Logest, Mersilon, Silest, Miniziston, Marvelon, Microgonon, Femoden, Regulon, Rigevidone, Demulen;
izigaba zokubeletha ngomlomo ezintathu - okuqukethwe kwe-hormone yezocansi kuyashintsha ukuze kulungiswe ngokunembile ukuhlushwa kwemvelo kwama-hormone ocansi emzimbeni wesifazane ngesikhathi sokuya esikhathini; Amalungiselelo: Clayra, Tri-Metsi, Trikwilar, Triziston, Tri-regol, Milvané.
2. Amathebulethi amancane (i-mini-second) - aqukethe i-progesterone kuphela. Amalungiselelo: Laktionet, Eksluton, Charozetta, Norkolun, Microlut, Micronor.
Esikhathini esithile esikhethekile sezinzalo zokubeletha ngomlomo kungathiwa yizikhwama eziqukethe izingxenye ze-estrogen ne-antiandrogenic ezisiza nge-acne, ukulahlekelwa izinwele, i-seborrhea, ukwanda kwezinwele emzimbeni. Ukulungiselela: Yarina, Mediana, Zhanin, Belara, Chloe, Diana-35.
Ngeke kuthiwe, amaphilisi okubeletha ngomlomo ayingozi noma awusizo. Kodwa into eyodwa ngokuqinisekile, ngokufaka isicelo esifanele ngaphansi kokuqondiswa kukadokotela, ngokuhlolwa njalo nokulethwa kwazo zonke izivivinyo ezidingekayo, ingozi yempilo yabesifazane isinciphisa noma engekho ngokuphelele.
Izindlela zokuvimbela ukukhulelwa: i-intrauterine ivunguza "iMirena"
Indlela ikhalenda yokuvikela ekukhulelwe
Indlela yokukhetha ukwelashwa kwe-hormonal? Imiyalo yokusetshenziswa
Ingabe kufanele ngiphuze izisu zokuvimbela ama-hormone?
Ukulahlekelwa kwesisindo nge-celery
Indlela yokwenza ukwakheka kwesikhashana
Amazambane ama-sweet with sauce
I-pneumonia: ukwelashwa nokuvimbela
Umshado waseTarasova noKostenko: UVictoria Lopyreva wagxeka umakoti, isithombe
I-Laboratory ne-diagnosis yezinsimbi zezingaphakathi zangaphakathi
Isaladi ka-Olivier nenkukhu
Isitayela saseGibhithe: umendo omusha we-meikap-2016 kusuka ku-Chanel
Isaladi yaseMedithera nge pepper
Indlela yokwenza indlu yedoli ngezandla zakho
Izambatho zebesifazane ezithandwayo kakhulu